Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dalka dib ugu soo laabtay”sawiro” – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dalka dib ugu soo laabtay”sawiro”
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen”Muungaab’ ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib Safar shaqo uu ku tagay dalka Turkiga kaas kulamo gooni gooni kula soo qaatay madaxda dalkaas oo uu ka mdi aha Rai’sul Wasaare Ku xigeenka dalka Turkiga iyo madaxda hay’adda TIKA .
Markii uu ka soo dagay Gudoomiye Muungaab ayaa waxaa uu dhagax dhigay Iskuul Wax lagu bari doono carruurta si bilaash ah Kaas ku yaala degmada C/casiis gaar ahaan Xaafada Jeneral Neero isagoo sidoo kale dhagax dhigay Waax cusub oo ay Yeelan doonto degmada C/casiis ee gobolka Banaadir.
‘Degmadda C/casiis kaliya waxaaan Ka furnay dhowr Mashaariic oo ay kamid yihiin laba Isbitaal,laba Iskuul iyo kuwa maanta aan Joogno waana hal degmo oo kaliya mashaaariicdaas dhaman waa kuwa ka socda degmooyinka 17 ka ah ee gobolka Banaadir” ayuu yiri Gudooomiye Muungaab.
Mudooyinkii dambe ayaa maamulka gobolka Banaadir waxaa uu ku howlanaa dib u soo celinta goobaha danta guud oo ku burburey dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Barlamaanka Soomaaliya oo soo saaray qaraar ku saabsan xuquuqda carruurta
Ciyaaraha Soomaalida qurba joota oo lagu soo gebagebeeyay Amsterdam (Sawirro)